ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီ
ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီ
Posted by မောင်ရိုး on Apr 29, 2017 in Aha! Jokes, Satire | 24 comments
** ခေတ်နဲ့အညီ . . ထီ ထီ ထီ **
ခေတ်ရေစီးသည်ကားးးး အပြောင်းအလဲမြန်လှသည် ။ အခုတမျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးနှင့် အရူးမကို ပန်းပန်ပေးရသလိုပင် ။
အွန်လိုင်းမီဒီယာခေတ်မို့ သတင်းတွေလဲမြန်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း . . .
နံနက်လင်းလို့ မဟာဖွဘုတ်တော်ကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ခွေးမသာချသည်မှအစ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများသတင်းအဆုံး အလုံးစုံတက်၍လာတော့သည် ။
ထိုထိုသောသတင်းများကို မှီ၍လုပ်ကိုင်စားကြသူများသည်လည်း အတော်အတန်ချောင်လည်ကြသည်မဟုတ်လော ??
စားဝတ်နေရေးအလုပ်အကိုင်များမှာလည်း သတင်းစကား အကြိုအကြားကိုလိုက်၍ ခေတ်ရေစီးတွင် မျှောရသည်မို့ . . .
ပြောင်းလဲချိန်ကားးး တန်ခဲ့လေပြီ တည်းးး ။ ။
မောင်ဆာမိလည်း ခေတ်ရေစီးနှင့်အတူပြောင်းလဲနေလေပြီ ။
ယခင်ကာလများက ယခုလိုနွေရာသီရောက်ချိန်တွင် မီးမလာရေပြတ်သဖြင့် ရေစည်လှည်းဖြင့် လက်မလယ်နိုင်အောင်ရောင်းခဲ့ရဖူးသည် ။
ယခုသော်ကားးး ခေတ်တစ်ခုအပြောင်းတွင် ရေမရောင်းရတော့ ။
လက်ငုတ်လက်ရင်းဂျလေဘီ ရောင်းသောအလုပ်သည်လည်း sugar tax ဆိုသောအသံကြားကတည်းက စမုံတုံးသွားခဲ့လေပြီ ။ ဤသို့ဖြင့် . . .
မည်သည့်အလုပ်အကိုင်လေးများလုပ်ရလျှင်ကောင်းမည်နည်းဟု တွေးပြီးလျှင် အွန်လိုင်းတခွင် ပြဲပြဲစင်အောင်မွှေနေမိလေတော့၏ ။
” အလို !!! ကြားသားမိုးကြိုးးးး မြန်မာ့အောင်ဘာလေထီက သိန်းတစ်သောင်းဆုပေးတယ်ဆိုပဲ ”
အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက်ဆိုသလိုပင် မောင်ဆာမိတစ်ယောက် ထီပြေးထိုးလေတော့သည် ။
လကုန်ရက်ဖြစ်သဖြင့် ထီလက်မှတ်များ ကုန်စပြုနေလေပြီ ။
ထို့ကြောင့် ခါးကြားတွင်လိပ်ထားသော တစ်ထောင်ကျပ်တန်တစ်ရွက်ထုတ်ကာ သိန်တစ်သောင်းဆုတန် ထီလက်မှတ်နှစ်စောင်ဝယ်လိုက်လေ၏ ။
ဤတွင် ပြဿနာစလေတော့သည် ။
ထီလက်မှတ်နှစ်စောင်မှာ အရောင်မတူ ။
ထို့အပြင် တစ်စောင်သောထီလက်မှတ်မှာလည်း ဖွင့်မည့်အကြီမ်ရိုက်နှိတ်ထားခြင်းမရှိ ။တစ်ခုခုတော့လွဲနေပြီထင့် ?
“ဒီမှာ ဒီမှာ . . ကျနော့်ကို ဒီထီလက်မှတ်လေး ပြန်လဲပေးပါလား ထွက်မယ့်အကြိမ်လည်းမပါတော့ ဘာမှန်းမသိလို့ပါ ”
ထီရောင်းသော အမျိုးသမီးမှာ မောင်ဆာမိအား မျက်မှောင်ကုတ်၍ကြည့်ပြီးလျှင်
” ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒါအရံထီလက်မှတ်လေ . . ထီရုံးမှာတရားဝင်ကြေငြာထားတာဘဲ ”
“သြော် . . ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့  ဒါနဲ့ ဘာလို့အကြိမ်ရေမရေးထားတာလဲဟင် ”
” အဲ့ဒါတော့မသိဘူးရှင့် သိချင်ရင် ရုံးမှာသာသွားမေးကြည့် ကျမတို့က အတုလုပ်ရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး အရံထီနဲ့ပုံမှန်ထီကိုအရောင်ခွဲထားတယ် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ထီနဲ့လဲ အရောင်မတူဘူး ”
” ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ ကျနော်စဉ်းစားမရတာက ဒီလိုအကြိမ်ရေမပါတော့ အခြားအပတ်စဉ်က ထီတွေနဲ့ရောသွားမလားလို့ပါ . . အရောင်ခွဲတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ အရောင်တွေအများကြီးရှိတာမဟုတ်တော့ ပြန်တူသွားနိုင်သလားလို့ပါ ”
ထီသည်အမျိုးသမီးမှာ စိတ်မရှည်သောအမူယာဖြင့် မောင်ဆာမိအားကြည့်ပြီးလျှင် . .
” ဦးလေး ဒီလက်မှတ်ယူမှာလား ”
” ဟုတ် ဟုတ် ယူပါ့မယ်ဗျာ ”
ဤသို့ဖြင့် မောင်ဆာမိတစ်ယောက် ထီလက်မှတ်နှစ်စောင်အား ကသောကမျောယူလျှက် ထွက်လာခဲ့လေတော့သည် ။
မောင်ဆာမိတစ်ယောက် ဂျလေဘီမရောင်းတော့ပြီ ။
ရေလည်း မရာင်းတော့ ။
ယခု ထီရောင်းရန်ပြင်ဆင်နေလေတော့သည် ။
ထီရောင်းရန်ဆိုသည်ထက် ထီလက်မှတ်အဟောင်းများပြန်လိုက်ဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်လေသည် ။
ထီလက်မှတ်အဟောင်းများဆိုသည်ထက် အရံထီလက်မှတ်များဆိုလျှင်ပိုမှန်ပေလိမ့်မည် ။
အဘယ်သို့ နည်း ????
အကြိမ်ရေမပါသော အရံထီလက်မှတ်များအား ရီဆိုင်ကယ်အဖြစ်ပြန်လည်ရောနှောရောင်းချသောဈေးကွက်အတွက် ကြိုတင်ကုန်ကြမ်းစုဆောင်းသောအလုပ်ပင်ဖြစ်လေသည် ။
ထို့ကြောင့် အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက တက်ကြွစွာဖြင့် အရပ်တကာလှည့်လည်ပြီး ထီလက်မှတ်အဟောင်းများဝယ်ရန်ပြင်ဆင်နေလေတော့သည် ။
” ~~ ထီ ထီ ထီ . . ထီဆိုတာ ငွေကိ်ုခေါ်တယ် ~~ ငွေလိုရင် ထီကိုဝယ်မယ် ~~ တူ့နယ့် . . တယ့်နယ် . ~~ ”
ဤသို့လျှင် သီချင်းလေးတအေးအေးဖြင့် အရံထီအဟောင်း ဈေးကောင်ပေးဝယ်ရန်ပြင်ဆင်နေခိုက် . .
” ဗျို့ . . မောင်ရင်ဆာမိ ဘာတွေအူမြူးနေသလဲဗျ ”
“ဟာ ဦးဖက်တီးပါလား . . မတွေ့တာတောင်ကြာပေါ့ . . ကျုပ်အခု အလုပ်အသစ်တစ်ခုစမလို့ဗျ ”
” လင်းစမ်းပါဦးမောင်ရင်ဆာရဲ့ ဘာတွေများဂွင်ကောင်းတွေ့ထားလို့လဲ ”
“ဦးဖက်တီးကိုတော့ လူရင်းဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ ကျုပ်အခု သိန်းတစ်သောင်းဆု အရံထီလက်မှတ်အဟောင်းတွေ လိုက်ဝယ်မလို့ဗျ ”
” ငင် !! ဘာလုပ်မလို့လဲ မောင်ရင်ရဲ့ . .
စက္ကူစက်တွေကို ပျော့ဖတ်အဖြစ်ပြန်သွင်းမလို့လား . . လုပ်မနေနဲ့မကိုက်ဘူးငါ့လူ . .”
“ဟုတ်ဖူးးး ဗျ . . ပြန်ရောင်းဖို့စုနေတာ ”
” ဟေ !! . . မင်းရူးနေလား ငဆာ !! မင့်ထီလက်မှတ်အဟောင်းကဘာလုပ်ရမှာတုန်း ”
မောင်ဆာမိမှာ ဦးဖက်တီးအား ကရုဏာသက်စွာကြည့်ရင်း ခွေးလှေးယားစေ့ လက်တစ်ဆုတ်မျှစားထားသောမျက်နှာပေးဖြင့် . . .
” ခေတ်ရေစီးဗျ ခေတ်ရေစီးးးးး . . ခေတ်နဲ့အညီမပြောင်းလဲနိုင်ရင် မြောင်းပုတ်ထဲကရေတောင် သောက်သုံးရေမဖြစ်ဘူးးဗျ . . ဒီမှာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံကပြန်လည်ထူထောင်စနိုင်ငံမဟုတ်လားးး ? ဒီတော့ ဘာမဆိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေ ရီဆိုင်ကယ်ပြန်လုပ်ပြီး အသုံးမပြုတတ်ရင် စင်္ကပူကို နှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းဘယ်မှီပါ့မလဲ . ဟဲဟဲ . . သေချာနားထောင် ကျုပ်ရှင်းပြမယ် . .”
“လုပ်စမ်းပါဦး မင်းရဲ့ ပြည်ဖျက်စီမံကိန်းကြီးကို သိချင်စမ်းပါဘိ ”
‘”ဒီိလိုဗျာ အခုအရံထီလက်မှတ်တွေမှာ အကြိမ်ရေမရိုက်ထားဘဲတရားဝင်ဆိုပြီးရောင်းခွင်ပြုထားတယ်မှတ်လား . . ဒါပေမယ့် တစ်လနဲ့တစ်လ အရောင်မတူအောင်တော့ပြောင်းပေးထားမယ်ပေါ့ဗျာ . . အဲ့ဒီမှာစတွေ့တာဘဲဗျို့ ဘယ်သကောင့်သားက ဘယ် လက ဘယ်အရောင်ဆိုတာ အကုန်မှတ်မိနိုင်ပါ့မလဲဗျာ ။ အထူးသဖြင့် တောတွေ နယ်တွေမှာဆို အကြိမ်ရေပါတဲ့ထီလက်မှတ်အဟောင်းတောင် ပြန်ရောပြီးထည့်ရောင်းသေးတာဘဲ ။ အခုလိုအကြီမ်ရေမပါဘူးဆိုတော့ သုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်ရောရောင်းလိုက်ရရင်ဖြင့် ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဗျ . . သိသွားတော့လဲ ထုံးစံအတိုင်းဘွာတေး ဘွာတေးပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ . . အဲ့ဒါ ကျုပ်က ကိုယ်တိုင်နယ်ကိုလိုက်ရောင်းမယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြန်သွင်းဖို့ အခုကတည်းက အရံထီလက်မှတ် အဟောင်းတွေစုဆောင်းနေတာဗျို့ . . ကွိ ကွိ ကွိ ကွိ . . “”
‘” အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းဆုလက်မှတ်အဟောင်းတွေဝယ်ဒယ် . . ပဲလှော်နဲ့လဲဒယ် . . အရံထီ လက်မှတ်အဟောင်းတွေ ဈေးကောင်းပေးဒယ် . . . ပဲလှော်နဲ့လဲဒယ် . . . ”
သို့လော သို့လောနဲ့ မရှင်း မရှင်း လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စကို…..
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဖြေပေါ်အောင်… ရေးကြတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါမယ့်… အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘလာဘလာ အော်နေရုံနဲ့… ရပါ့မလား။
ရပ်ကွက်ထဲက ဒေါ်ဖွားမေတို့ မတင်ရွှေတို့ ကိုလှအုန်းတို့က ဖေ့စဖုတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ….
မြန်းဂဇက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ။ ကီးပတ် ဟန်းစက် သုံးနည်းတောင် သူများဆီက သင်ယူနေရတာ။
အကြိမ်ရေ ဖော်ပြမထားတဲ့ ငါးရာတန်အရံထီလက်မှတ်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ဆန္ဒပြကြသင့်တယ်ထင့်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း… လွှတ်တော်ထဲထိ ရောက်အောင်….
လူညီရင် ဤနဲ့မတူတဲ့ကျွဲကို ပေါ်စားကြပါစို့။
ဒါမယ့်… ဒါ ဗမာပြည်…. ဤယောင် ဆောင်တဲ့ ကျွဲကို ပေါ်စားမယ့် အဆင့်ကို မပြောနဲ့အုန်း။
လူညီဖို့တောင် ဆုတောင်း… ဆုတောင်း…
ဒီခေတ် ကန်စွန်ရွက်သည်လည်းဖွဘုတ်သုံးတယ် ။
ဆိုက်ကားသမားလည်း ဖွဘုတ်သုံးတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုရေးတယ်ဆိုတာ ဆန္ဒပြနေတာမဟုတ် ။
ဆန္ဒပြလောက်အောင်လည်း နိုင်ငံရေးပိုင်းမဟုတ် ။
ထပ်ပြောရရင် ဘယ်အစိုးကိစ္စဖြစ်စေ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အဆင့်မရှိလို့ ဝင်မပြောဘူး ။
အွန်လိုင်းမှာရေးတယ်ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ် ။
ဒီလိုရေးလို့ ဒီကိစ္စကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်လို့လဲ လုံးဝ (လုံးဝ) မထင်ဘူး ။
ဟိုလူ့သွားပြောပါလား ဒီလူ့သွားပြောပါလားဆိုတဲ့ ဂွကျကျအပြောတွေတော့ လာမပြောနဲ့ ။
တိုင်စာတွေပစ်စာတွေ အကြံပေးတာတွေ ဝါသနာမပါဘူး ။
ဒီနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ်ကြည့်ရှောင်ရတာ အကျင့်ပါနေပြီ ။
ဒါဆို ဘာလို့ရေးတာလဲဆိုရင် . .
ဒီတော့ ဒါမျိုးမရေးစေချင်ရင် အယ်ဒီတာက ပိတ်ပင်တားဆီးပါလိမ့်မယ် ။
မော်ဒရေတာတွေဟာ မော်ဒရေတာတွေလိုနေတာကောင်းတယ် ။
ထပ်ပြောရရင် ဖွဘုတ်ပေ့ခ်ျမှာ ရေးမယ်ဆိုတိုင်းအများအားဖြင့် ဒီမှာအရင်တင်လေ့ရှိတယ် ။
(လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြော်ငြာတွေတော့ တတ်နိုင်သမျှဒီမှာမရေးဘူး ။ ဒါပေမယ့် ရေးတော့ရေးဖူးတယ် )
ဘာလို့ဒီမှာအရင်ရေးလဲဆိုရင် ပထမဆုံးစတင်ရေးဖူးတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်မို့ ယခင်သံယောဇဉ်နဲ့ရေးတာ။
ဆိုတော့ . . .
လွှတ်တော်တွေ ပရင့်မီဒီယာတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး ။
မော်ဒရေတာတွေထဲမှာ ဟို alinsett ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ပါတယ် ဦးလေး။
ဦးလေး မသိသေးတာက…. အခု မန့်သွားတဲ့
ဒီအကောင့်(သင့်အေးရိပ်)က အဲ့ မော်ဒရေတာဆိုတာကြီး တံဆိပ်အကပ်မခံနိုင်လို့
သပ်သပ် ထပ်ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်သစ် စစ်စစ်လေး။
ပိုစ်တောင် တစ်ပုဒ်ပဲ တင်ရသေးတဲ့ အကောင့်လေး။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး လူတကာပိုစ့် လိုက် စွက်ဖက်= ပြီးရင် အဆဲခံရတဲ့ alinsett အကောင့် မဟုတ်ရေးချ မဟုတ်တာကို ရှု
အနော် အပေါ်မှာ ပြောတဲ့ မန့်ကလည်း တခြား စိတ်နဲ့ ပြောတာ မဟုတ်။
အနော် နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဒေါ်ဖွားမေတို့ မတင်ရွှေတို့ ကိုလှအုန်းတို့က တကယ့်ကို ဖေ့စဖုတ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ….မြန်းဂဇက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ။ ကီးပတ် ဟန်းစက် သုံးနည်းတောင် သူများဆီက သင်ယူနေရတာ
ဆိုတော့…. ပြည်သူတိုင်း သိနိုင်အောင် ပိုထိရောက်အောင် ထိထက် အသံကျယ်ကျယ် ပြောကြပါစို့ ဆိုတဲ့
ဒါမျိုး များများ ရေးရုံတင်မက….. ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေ ကြားအောင်ပါ အသံထွက် ဖတ်ပြရမှာလို့…။
ပို့မယ့်ပို့ အရောက်ပို့… ပြီးရော ဦးလေးရယ်….
” ပြည်သူတိုင်း သိနိုင်အောင် ပိုထိရောက်အောင် ဒီ့ထက် အသံကျယ်ကျယ် ပြောကြပါစို့” လို့ ပြောချင်တာ။
ကိုယ့်မန့် ကိုယ် Edit လုပ်ခွင့် မရှိသေးတော့….
” ပြည်သူတိုင်း သိနိုင်အောင် ပိုထိရောက်အောင် “ထိ”ထက် အသံကျယ်ကျယ် ပြောကြပါစို့” လို့ ဖြစ်သွားတယ်။
ပြောလိုက်စမ်း ဟဲ့ ခရီးသည်ကြီး
ထင်တယ်… ဒါမျိုးဆို… ဒီလူတွေ ပေါ်လာပြီး ဆွမ်းကြီး လောင်းမဟဲ့ဆိုပြီး ရောက်လာမယ်ဆိုတာ။
အစသာ ဖော်ပေးလိုက်လို့ကတော့ မော်မော်တွေကို ဆဲဖို့ နှုတ်ခမ်းပြင်ထားတာတွေ လက်စ မသတ်သေး။
တော်သေးတယ်။ အဲ့ မော်မော် အကောင့်ကြီး ပါတ်စ်ဝါ့က အစ မေ့ပစ်လိုက်ပြီး အခု ဘာမှ Edit လုပ်မရတဲ့ အကောင့်သစ်လေး ဖွင့် သုံးနေလို့။
ဆဲချင်… alinsett အကောင့်ကိုပဲ ဆဲကြဟေ့။
သင့်အေးရိပ် အကောင့်က alinsett အကောင့်နဲ့ မဆိုင်ရေးချ မဆိုင်သမို့….
မော်မော်တွေကို ဆဲလည်း ဒီလူက မဖြုံ…။
အေး…. ဒါကိုမှ ဒီလူကိုမှ အခွင့်ကြုံတာနဲ့ ဆဲချင်တယ် ဆိုရင်တော့….
အ ရံ ထီ ဆိုပြီး ​တည်​ ထွင်​ ​ရောင်း ချ တဲ့ တာ ဝန်​ ရှိ သူ ​တွေ ကို ဘဲ နို ဘယ်​ ဆု ချီး မြင့်​ ​ပေး ရ မ လို ပါ ဘဲ ဗျာ။ ဝန်​ကြီး တို့ ဘာ တို့ က လဲ နဲ နဲ ​တော့ ကိုယ့်​ လူ ​တွေ ကိုယ်​ ပြန်​ စီ စစ်​ ​ဘို့ ​ကောင်း တာ ​ပေါ့။
သူတို့မှာလည်း သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ် ။
သူတို့ကိစ္စကျနော်တို့မှမသိနျုင်တာဆိုတော့ . .
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အပျင်းပြေ ရေးကြတာပေါ့ဗျာ
ဟုတ်​ ပ ဗျာ ကိုယ်​ ဘဲ လိုက်​ မ မှီ ​တော့ တာ လား မ သိ ဘူး လုပ်​ ​ပေါက်​ ​တွေ က အား ရ စ ရာ မ ရှိ ဘူး ။ ကိုယ်​ ​တွေ တင်​ တဲ့ အ စိုး ရ ဆိုပြီး ​စောင့်​ ငြည့်​ ​နေ ရ တာ။
ဗုဒ္ဓ ယေရူ အလ္လာ ရှိသမျှ ဘုရား ကယ်တော်မှုပါ ..
အနော်လဲ ရှယ်ယာ ပါ ပါ ရစေ … အတု လုပ်တာ ဟုတ်ဘူး အဟောင်းရောင်းတာ ဆိုတော့ … ဘာမှု နဲ့ ဖမ်းမလဲ ဟင်င်င်…
@ သင့်အေးရိပ် / အလင်းဆက် / မောင်သူရ
ကျုပ်အဖို့တော့ ဘာနာမည်သုံးသုံးအတူတူဘဲလို့မှတ်ယူတယ် ။
အဓိက မော့တွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး ။
မော့တစ်ယောက်ခြင်းစီကို ပြောစရာရှိလည်း တိုက်ရိုက်ပြောယုံဘဲ
ဘယ်သူမော့ဆိုတာလည်း အတော်များများသိနေတာဘဲ ။
အပေါ်မှာကိုပေါက်နဲ့ဖြစ်တာ စိတ်မဝင်စားဘူး ။
ဒါက မောင်ရင်နဲ့ကိုပေါက်ကိစ္စ ။
အဓိကပြောချင်တာ စပြီ ။
ကျုပ်အနေနဲ့ မောင်ရင့်ကွန်မန့်ကို ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်
“” ခင်ဗျားကြီးပြောချင်ရင် လွှတ်တော်သွားပြောလေဗျာ ပရင့်မီဒီယာကအော်ပေါ့ လူမဖတ်တဲ့အွန်လိုင်းမှာလာပြောလို့အလကားဘဲ “”
အဲ့ဒီလို အဓိပ္ပါယ်နားလည်မိလို့ ပြန်ပြောတာ ။
ကျုပ်က တစ်ဦးချင်းစီကိုပြောချင်ရင် အွန်းလိုင်းက ပွစိပွစိလုပ်တာဝါသနာမပါဘူး ။
မောင်ရင့်ကိုပြောချင်ရင်လည်းဖုန်းဆက်မှာဘဲ ဒါမှမဟုတ် လူချင်းမျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြောမှာဘဲ ။
ရိသဲ့သဲ့တွေထေ့ငေါ့ငေါ့တွေ လုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူး ။
မောင်ရင် ဘယ်လို သဘောနဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေ မောင်ရင်ရေးလိုက်တဲ့ကွန်မန့်ကိုတော့ အထက်မှာပြောသလ်ုဘဲနားလည်မိတယ် ။
ဆိုတော့ . .
ကျုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောချင်ရင် ဖုန်းဆက်ပါ ။
ဒါမှမဟုတ် မျက်နှာခြင်းဆိုင်ပြောပါ ။
နောင်လည်း ရေးချင်စိတ်ပေါက်ရင် ရေးဦးမှာဘဲ ( အယ်ဒီတာခွင့်ပြုသ၍)
ကန့်သတ်ထားတဲ့ ဂဇက်စည်မျဉ်းကိုကျော်သွားရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြပါလေ . .
ကျနော့် ကွန်မန့်ကို ” ခင်ဗျားကြီးပြောချင်ရင် လွှတ်တော်သွားပြောလေဗျာ ပရင့်မီဒီယာကအော်ပေါ့ လူမဖတ်တဲ့အွန်လိုင်းမှာလာပြောလို့အလကားဘဲ”အဲ့လို အဓိပ္ပါယ်နားလည် သွားတာတော့ စိတ်မကောင်းပါ။
ပြောလိုရင်းက များများ ပြောကြဖို့။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောကြရင် ပို ထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုရင်း။
အပြောမတတ်တော့ ဆဲသလို ဆိုသလို…. ကျနော် အရေးအသား ညံ့လို့ လိုရာ မရောက်ပဲ နားလည်မှု လွဲသွားရင်
ကျနော့်အဖို့တော့ … အခု သုံးနေတဲ့ မန်ဘာအကောင့်ဟာ အရင်က သူကြီးရဲ့ ရာထူးတွေ ပေးထားတဲ့ alinsett အကောင့် လုံးဝ မဟုတ်။ ဒီအကောင့် သစ်ကနေလည်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ရွာထဲက ကြီးတော်နွားတွေ မကျောင်းရေးချ မကျောင်း။
ဆိုတော့… မော်ဒရေတာတွေ ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေ ကျနော်(သင့်အေးရိပ်)ကို ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူးလို့။
မန်ယူ 1-1 ကျပြီး ချယ်ဆီး 3-0 နဲ့ နိုင်သွားလို့ သောကရောက်နေရတဲ့အထဲ
ရန်ဖစ်ချင်ရင်လည်း ရန်ပွဲစား ခင်ဇော်လေး အားဒဲ့ ထိ စောင့်ဂျဘာအု။
ဒါမိုးပွဲဒွေ မပါလိုက်ရရင် ရင်ထုမနာဖစ်နွန်းနွံ့ဘာ။
ယောက်ခမ ဆာ ဒါမိုးကျ အားကိုးရထာ
ထီထိုးတာ ဝါသနာမပါ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း Random တွေနဲ့ အကျိုးမပေး.. အလကားပိုက်ဆံရကံမပါ လို့ ခံယူထားတော့ ထီလုံးဝမထိုးဘူး..
အခုကျ သိန်းတစ်သောင်းဆိုတော့ မက်စရာလေးလည်းရှိ.. မဲလေးတွေ ဘာလည်း ပေါက်တတ်တော့ ထီထိုးမလား စဉ်းစားမိပါတယ်.. ဘာတွေမှန်းကို နားမလည်တော့လို့ မထိုးတော့ဘူး
ဒါဆိုရင်တေ့ ဦးဆာမိကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ရွာတွေမှာ သွားရောင်းပါ။ မနောကတော့ ထီထိုးပြီဆိုရင် အကြိမ်ကိုလည်းစစိတ်တယ်။ အက္ခရာလည်း စစ်တယ်။ အများကြီးလည်းသိပ်မထိုးဘူး ပေါက်ကံပါရင် ပေါက်မှာပဲလေဆိုပြီး တစ်စောင်တလေပဲ ထိုးတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ထီကိုယ်စားလှယ်လက်မှတ်လုပ်ပြီး ရောင်းဖူးတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း ရပ်ကွက်တို့ ရုံးတို့ အပေါင်းအသင်းတွေကို လပေးပုံစံယူပြီးရောင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မရောင်းဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ မဲစုတာတို့ နှစ်လုံးသုံးလုံးတို့ကတော့ ၀ါသနာမပါလို့ အရင်ထဲက မလူပ်ဘူး။
တရားစွဲဖို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရမှာပဲ?????စတာပါ တကယ်ပါ အတည်ပါ။?ထီနဲ့လည်းအလှမ်းဝေးတော့ တကယ်ပါ သိန်းတစ်သောင်းတန်ထီဆိုတာ အဖြူရောင်လား အနက်ရောင်လားတောင်မသိဘူးရယ်။ ခုတော့ သိသွားသမို့ ပြေးထိုးပြီး အရောင်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့??
ဒေါ်လာ သန်း၄၀၀လောက်အထိ ရောက်တတ်တယ်..။
ပေါက်ရင်.. လကမ္ဘာမှာတိုက်ဆောက်သွားနေလို့ရတယ်..။ အင်္ဂါဂြိုလ်မှာ… နွေရာသီစံအိမ်ထားလို့ရဒယ်..။
ထီပေါက်တဲ့လူတွေဟာ ၄-၅ နှစ်လောက်ကြာရင် ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွားရောတဲ့။ ကြားဖူးတာပဲ။ မြောက်မြားတဲ့ ငွေကြေးကို မစီမံ မခန့်ခွဲတတ်လို့လား မသိဘူး။ ပြီးတော့လေ အစိုးရက ပြည်သူပေါ် တကယ်စေတနာထားရင် အဲလို ပိုးစိုးပက်စက် လုပ်မယ့် အစား လူတစ်ယောက် ဘ၀ရပ်တည်ဖို့ အရင်းအနှီးလောက်ကို ဆုငွေအဖြစ် ပေးရင်ကောင်းမှာရယ်။ ဥပမာ သိန်းတစ်သောင်း အစား သိန်း ၃၀၀ အယောက် ၃၅ ဦးလောက် ပေးလိုက်တာမျိုး။ အာ့ဆို လူ ၃၅ ဦး ဘ၀ရပ်တည်ဖို့ အိုကေသွားမယ်။ တစ်လကို ၃၅ ဦးဆို တစ်နှစ်ဆို မနည်းဘူး။